John 19 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Zvino Pirato wakatora Jesu, akamurova netyava.
Varwi vakaruka korona yemhinzwa, vakaisa pamusoro wake, vakamupfekedza nguvo shava.
Vakati: Hekanhi, Mambo wavaJudha! Vakamurova nembama.
Ipapo Pirato akabudazve panze, akati kwavari: Tarirai, ndinomubudisira kwamuri, kuti muzive kuti handiwani mhosva kwaari.
Jesu akabuda panze, akadzika korona yemhinzwa, anenguvo shava. \_add Pirato\_add* akati kwavari: Tarirai munhu uyu!
Zvino vaprista vakuru navatariri vakati vachimuvona, vakadanidzira, vachiti: Rovera, rovera! Pirato akati kwavari: Chimutorai imwi, murovere; nokuti ini handiwani mhosva kwaari.
VaJudha vakamupindura, \_add vakati\_add*: Isu tinomurairo, zvino nomurairo wedu unofanira kufa, nokuti wakazviita Mwanakomana waMwari.
Zvino Pirato wakati anzwa shoko iri, akanyanya kutya.
Akapindazve mumba momutongi, akati kuna Jesu Unobvepiko iwe? Asi Jesu haana kumupa mhinduro.
Ipapo Pirato akati kwaari: Hautauri neni here? Hauzivi here kuti ndine simba rokukurovera uye ndine simba rokukusunungura?
Jesu akapindura, \_add akati\_add*: Haungatongovi nesimba pamusoro pangu, kana usina kuripiwa richibva kumusoro; naizvozvo wakandikumikidza kwauri, unezvivi zvinokunda zvako.
Zvino kubva ipapo Pirato akatsvaka kumusunungura; asi vaJudha vakadanidzira, vachiti: Kana mukasunungura munhu uyu, hamuzi shamwari yaKesari; mumwe nomumwe unozviita mambo, unoramba Kesari.
Zvino Pirato wakati anzwa shoko iroro, akabudisa Jesu, akagara pachigaro chokutonga, panzvimbo inonzi Pakarongwa naMambwe, asi nechiHebheru Gabhata.
Zvino raiva \_add zuva re\_add*gadziriro yepaseka; yaiva nguva inenge yechitanhatu. Akati kuvaJudha: Tarirai Mambo wenyu!
Asi vakadanidzira, \_add vachiti\_add*: Bvisa, bvisa, umurovere! Pirato akati kwavari: Ndorovera Mambo wenyu here? Vaprista vakuru vakapindura vachiti: Hatina mambo, asi Kesari chete.
Naizvozvo akamukumikidza kwavari, kuti aroverwe. Zvino vakatora Jesu vakaenda naye.
Akabuda akatakura muchinjikwa wake, akaenda kunzvimbo yainzi yeDehenya, nechiHebheru ichinzi Gorogota;
apo pavakamurovera navamwe vaviri naye, mumwe parutivi, mumwe parutivi, Jesu pakati.
Pirato akanyoravo chiziviso akachiisa pamuchinjikwa; chakanga chakanyorwa \_add kuti\_add*: JESU MUNAZARETA MAMBO WAVAJUDHA.
Zvino vazhinji vavaJudha vakarava chiziviso ichi; nokuti nzvimbo iyo pakanga pakaroverwa Jesu yaiva pedo neguta; rwakanyorwa nechiHebheru, nechiRoma, nechiGiriki.
Ipapo vaprista vakuru vavaJudha vakati kuna Pirato: Musanyora \_add muchiti\_add*: Mambo wavaJudha, asi kuti uye wakati: Ndiri mambo wavaJudha.
Pirato akapindura \_add akati\_add*: Zvandanyora, ndanyora.
Zvino varwi vakati varovera Jesu, vakatora nguvo dzake, vakaita migove mina, murwi mumwe nomumwe mugove; nenguvo yapasivo. Zvino nguvo iyi yakanga isina pakasonwa, asi yakanga yakarukwa yose kubva kumusoro kwayo.
Naizvozvo vakataurirana, vachiti: Ngatirege kuibvarura, asi tikande mijenya pamusoro payo, kuti ichava yaani; kuti rugwaro ruzadzisike runoti: Vakagovana nguvo dzangu pakati pavo. Vakakanda mijenya pamusoro pechokufuka changu. Ndizvo zvakaitwa navarwi.
Zvino pamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake, nomunin'ina wamai vake, Maria, \_add mukadzi\_add* waKiropasi, naMaria Magadharini.
Zvino Jesu wakati achivona mai vake, nomudzidzi waaida, amirepo, akati kunamai vake: Mukadzi, tarira, mwanakomana wako.
Shure kwaizvozvo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Kubva panguva iyo mudzidzi akavatora, akavaisa \_add kumba\_add* kwake.
Shure kwaizvozvi, Jesu wakati achiziva kuti zvinhu zvose zvapera, kuti rugwaro ruzadzisike, akati: Ndinenyota.
Zvino pakanga pakagadzikwapo hari izere nevhiniga; zvino vakazadza chipanje nevhiniga vakaisa parutanda rwehisopi, vakaisa kumuromo wake.
Zvino Jesu wakati agamuchira vhiniga, akati: Zvapera! Akakotamisa musoro wake, akapa Mweya \_add wake\_add*.
Naizvozvo vaJudha nokuti wakanga uri musi wokugadzirira, kuti mitumbi isagara pamuchinjikwa nezuva resabata (nokuti zuva resabata raiva zuva guru), vakakumbira Pirato kuti makumbo avo avhuniwe, kuti vabviswe.
Naizvozvo varwi vakavuya, vakavhuna makumbo owokutanga, noomumwe wakanga aroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye;
asi vakati vachisvika kunaJesu, vakavona kuti watofa hake, havana kuvhuna makumbo ake,
asi mumwe murwi wakabaya rutivi rwake nepfumo, pakarepo ropa nemvura zvikabuda.
Uyo wakavona, ndiye wakapupura, uye kupupura kwake ndokwechokwadi; iye unoziva kuti unoreva zvirokwazvo, kuti imwi mutende.
Nokuti zvinhu izvi zvakaitwa kuti rugwaro ruzadzisike runoti: Fupa rake haringavhunwi.
Norumwe Rugwarozve runoti: Vachatarira uyo wavakabvovora.
Shure kwaizvozvi Josefa weArimatia, waiva mudzidzi waJesu, asi pakavanda nokutya vaJudha, wakakumbira kuna Pirato kuti abvise mutumbi waJesu; Pirato akamutendera. Naizvozvo akavuya akabvisa mutumbi waJesu.
Kwakavuyavo naNikodhimo, iye pakutanga wakambovuya kuna Jesu vusiku, anemura* nearosi* zvakavhenganiswa, mapaundi anenge zana.
Ipapo vakatora mutumbi waJesu, vakamuputira nemicheka yerineni pamwe chete nezvinonhuhwira, setsika yavaJudha yokuviga.
Zvino panzvimbo iyo paakaroverwa pakanga pane bindu, mubindu imomo maiva nebwiro vutsva, makanga musina kumboiswa munhu.
Zvino vakaisa Jesu ipapo nokuda kwegadziriro yavaJudha, nokuti bwiro bwakanga bwuri pedo.